Dhageyso Waaliga Sh/Hoose oo Ka Warbixiyay Dagaalkii Ka Dhacay Jilib Marko. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Nov 20, 2018 279 0
Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose, Sheekh Max’ed Abuu Usaama oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalkii maanta ka dhacay degaanka Jilib Marko oo u dhow magaalada Marko.
Dagaalka oo dhex maray ciidamada Al-Shabaab iyo kuwa DF ayuu sheegay Waaligu inuu u sabab ahaa markii ciidamada DF ay duullaan ku qaadeen degaanka Jilib Marko halkaasoo muddo 15 daqiiqo ah oo ay joogeen ay ku dileen mid kamid ah dadka shacabka ah ee degaanka kuna qalqal galiyeen guud ahaan bulshada.
Wuxuu sheegay iyagoo taa ka jawaabaya iney gacan saareen askarta dowladda illaa ugu dambeyntii ay ku khasbeen iney ka firxadaan fagaarihii ay xabbadu ka socotay.
“Markii magaalada laga ceyrshay waxaa jidka loo dhigay weerar kale halkaasoo Ilaahay Subxaanahu Watacaalaa mar labaad uu ku asiibay illaa ay meeshii kaga cararaan gaari BEEBE oo ah hubkii ugu dambeeyay ee ay Turkigu u qeybiyeen nimankaan Murtaddiinta ah” sidaasi waxaa yiri’ waaliga wilaayada islaamiga ah ee Sh/hoose.
Sheekh Abuu Usaama ayaa intaasi ku daray in gaariga Beebaha ah uu ku rakibnaa Qori dhashiike ah. Sidoo kale wuxuu xusay in ay gacanta ku dhigeen qoryo yar yar oo ay askarta dowladda ka carareen.
Xaaladda degaanka Jilib Marko ayaa ahayd mid xasilloon tan iyo markii ay dagaalka ku jabeen ciidamada DF sida ay sheegayaan dad weynaha, waxaan askarta dowladda ay halhaleel u galeen magaalada Marko iyagoo aanan dib dambe soo eegin sida uu inoo sheegay Waaliga.
Mas’uuliyiinta DF oo ay kamid yihiin kuwa maamulka Shabeelaha Hoose oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday iney faahfaahiyaan dagaalkan khasaaraha badan dhaliyay ee maanta ka dhacay duleedka magaalada Marko.
Halkan Ka Degso Wareysiga Waaliga Sh/Hoose MP3